Nethezeka ngokwemvelo kuyo yonke i-Villa ene-swimming pool - I-Airbnb
Nethezeka ngokwemvelo kuyo yonke i-Villa ene-swimming pool
I-i-villa ephelele ibungazwe ngu-Cristoforo E Francesca
Ukukhansela kwamahhala ngaphambi komhla ka-Mas 2.
I-Villa Scalco igxile emvelweni, iyodwa futhi izungezwe izivini, inika izivakashi ukuthula, ukuthula nokuthula. I-Villa ingakwazi ukuhlalisa abantu abangafika kwabayi-16: ilungele ukuchitha iholide eliyingqayizivele nenkampani yomndeni wakho noma abangani. Isethulo sevidiyo se-Villa singatholakala ku-Youtube ngokucinga: Iholide lase-Italy Villa Scalco.
I-Villa Scalco e-Segonzano iyisakhiwo samatshe esidala sekhulunyaka le-17 esisanda kulilungisa ngokuphelele ngengxube efanele yasendulo nesimanje. Inamagumbi aphindwe kabili angu-8 wonke anendlu yokugezela yawo kanye ne-Jacuzzi futhi angakwazi ukuhlalisa abantu abangafika kwabayi-16. Isendaweni engayodwa futhi ebusayo phezu kwaso sonke isigodi, i-Villa izungezwe ngokuphelele uhlaza kanye nokuthula kwemvelo futhi iyindawo ekahle yalabo abafuna ukuphumula nokwenza kabusha kude nomsindo nokuyaluza kwempilo yansuku zonke.
ubusuku obungu-7 e- Segonzano
IVilla Scalco itholakala enhliziyweni yeTrentino, eSigodini saseCembra, isigodi esinikeza isivakashi ubuhle nokuthula kwendawo engakathintwa futhi elinde ukutholwa.
I landscape libhekene masimu ukutshala imivini, emahlathini, amachibi nemifula, izipesheli amazwibela ubuhle engenakuqhathaniswa kuze kube seqophelweni lokuthi umdwebi odumile German Albrecht Dürer wahlatshwa umxhwele ukuthi wayefanekisela lezi zindawo ngesikhathi evakashele e-Italy ngo 1494. Namuhla lezi ama-watercolor agcinwa kumamnyuziyamu abalulekile e-Oxford, eBremen, eMilan naseBerlin. Kuleli zwe lamasiko abalimi, kukhiqizwa iwayini nemimoya yekhwalithi enhle kakhulu, engathengwa ngokuqondile ezindaweni eziningi zewayini endaweni. I-Pinot, i-cabernet, i-chardonnay, i-müller turgau, ezinye zezingxube ezinikeza okungcono kakhulu emithambekeni ewumqansa yalesi sigodi.
Kulabo abathanda ukuhamba nokuhamba ngezinyawo, maningi amathuba ahlinzekwayo: indlela yase-Dürer, umzila wewayini nama-flavour, umzila waseYurophu u-E5 kanye nemizila engaba ngamashumi ayisithupha egudla amadolobhana, izinkuni namasimu. Idinga kakhulu noma ngaphansi, le mizila, imakwe kahle futhi ifakwe izindawo zokuphumula, ingahanjwa ngezinyawo, ngebhayisikili lezintaba kanye nehhashi. Okuthakazelisa ngokukhethekile isenzakalo se-geological esingavamile, ngenxa yokuguguleka kwamanzi, imibhoshongo yaseSegonzano, imisebenzi yeqiniso yobuciko bemvelo.
Eceleni kwalezi zindlela zemvelo, kukhona nezomlando - ezamasiko phakathi kwezinqaba, amasonto nezindawo ezingcwele.
Ekugcineni, kulabo abafuna ukuphumula ngokuphelele ngenkathi bejabulela ngokugcwele imvelo, bangakwenza ogwini lwamachibi amaningi okugeza namachibi agcwele izinhlanzi. Ukudoba nakho kuvunyelwe eduze nomfudlana we-Avisio.
Imimoya yasesigodini cishe amakhilomitha angama-50 ukusuka eLavis kuya eCastello di Fiemme, iwela umfudlana we-Avisio futhi unokuphakama ngaphezu kwezinga lolwandle okuhlukahluka kusuka kumamitha angama-300 kuye kwangama-900. Itholakala kumakhilomitha angama-20 ukusuka eTrento, amakhilomitha angama-50 ukusuka eBolzano.
Isiqalo esihle kakhulu sokuvakashela i-Trento, i-Bolzano, i-Verona, i-Dolomites, i-Lake Garda
Ibungazwe ngu-Cristoforo E Francesca
Sizobe sikhona ukuze sikumukele lapho ufika futhi sikubingelele lapho uhamba. Ngeke sihlale eVilla ngesikhathi uhlala, kodwa uma kwenzeka kuba nesidingo ucingo luyokwanela futhi emizuzwini embalwa sizobe sesinawe ukuze sikusize.